ကူညီကြပါဦးဗျို့ — MYSTERY ZILLION
ျနော့် ကွန်ပြူတာ က ဖွင့်မရတောဘူး။ ဝင်းဒိုးတက်မလာတော့ဘူး ။
Window could not start .because the fallowing file is missing or ???
Please re-installacopy ofaabove
(windows root)/system32/hal.dll. တဲ့
လို့ပြနေတယ်
ဘယ် လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိဘူး ။
ကယ် ကျပါ:(( အရပ်ကတို ့ရေ
ရှင်းနေတာပဲ.......... Window အသစ် ပြန်တင်လိုက်ပေါ့.......... ဟီးဟီး..........
ဒါမှ မဟုတ် တခြားစက်မှာ Slave သွားတပ်ပြီးတော့ လိုတဲ့ ဖိုင် ပြန်ကူးထည့်လိုက်ပေါ့......... အရေးကြီးတာက Virus ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တာမို့ ၊ တစ်လက်စတည်း Virus update ဖြစ်တဲ့ စက်မှာ တပ်ပြီး ပါနာတိပါတာ ကံကိုပါ ကျူးလွန်ခဲ့လိုက်........
ကဲဘာမှသာစဉ်းစားမနေနဲ့တော့ အနည်းစုံးတော့၀င်းဒိုးတင်ရမှာပါ စက်ကတော့ ဗိုင်းယစ်ကိုက်ခြင်းကြောင့်ပါ ဒါကြောင့် ဗိုင်းယစ်အပ်ပဒိတ် ရှိတဲ့စက်မှာ ဟက်ဒစ်ကို ယူသွားစစ်ပြီးရင်
သတ်ပစ် ပြီးရင် ၀င်းဒိုးကို ရီပဲလုပ် ဒါမှမရရင်တော့ ၀င်းဒိုအသစ်တာတင်ပါတော့ကွယ်
၀င်းဒိုးအခွေကိုထည့်ပြီး boot from cd ကနေ တက်။ ပြီးရင် ရီပဲ လုပ်ပေါ့။ ဒါမှမဟုတ်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပျောက်နေတဲ့ ဖိုင်ကိုပဲ command နဲ့ ကူးပေးလို့ ရတယ်။ မလုပ်တာကြာတော့ မေ့နေပြီ။ သိသူများ ၀င်ပြောကြပါခင်ဗျာ။
Please go to the following post.